Ngwa nkwanye ọkụ na mpụga Ldị L - N'ogbe mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-eji Ldị L ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị na ,tali, Chile, Uruguay, a na-ahụkwa ya na North Africa niile. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị L)
Plugkpụrụ kwụsịrị ntọala / soket nke Italy, CEI 23-16 / VII, gụnyere ụdị uwe abụọ emere ka amụọ 10 na 16 amps. Plugzọ nke abụọ a nwere njikọ atọ nwere ahịrị atọ a dọbara n'ahịrị ahịrị. Ha dịgasị iche na njikọta kọntaktị yana oghere, ya mere ha enweghị nkwekọrịta. Ampdị 10 am nwere atọ 4 mm gburugburu, na-atụ 19 mm n'ogologo. Ebe etiti ahịrị na ahịrị ndị nwere oghere na-adịkarị 19 mm dị iche. Oghere dị n'etiti etiti abụọ ahụ nke abụọ na etiti etiti ntụtụ ahụ bụ 9.5 mm. Soket 10 am soket na-anabatakwa ụdị C plọg.
N'aka ekpe bekee sọpasso, n'akụkụ aka nri nke sopasso-Schuko.
Ampdị 16 am nwere atọ 5 mm gburugburu, na-atụ 19 mm n'ogologo. Ogige ahịrị ahịrị na pin dị iche iche nwere oghere 26 mm dị iche. Oghere dị n'etiti etiti abụọ ahụ nke abụọ na etiti etiti ntụtụ ahụ bụ 13 mm. Ebe ọ bụ na plọg abụọ ahụ bara uru, enwere ike itinye ha n'otu akụkụ, nke pụtara na ha enweghị akwụkwọ.
N'ụbọchị ndị a eluigwe na ala sọlfọ dị, nke nwere ụdị abụọ: nke mbụ, enwere ihe a na-akpọ bipasso nnabata (n'ụzọ nkịtị: ejima-igwe ọpụpụ), sọks na-ejikarị nke na-anabata C plugs yana ụzọ abụọ nke L plugs. Nke abuo, enwere bipasso-Schuko nnabata, nke na-agbakwunye ndakọrịta na plọg ụdị E & F.
Nkwụnye ike & mpụga Typedị K